» हेटौँडाबाट राजधानी सार्ने प्रस्ताव दर्ता भएपछि मकवानपुरमा आक्रोश, मुख्यमन्त्री पौडेलमाथि नै प्रश्न ?
हेटौँडाबाट राजधानी सार्ने प्रस्ताव दर्ता भएपछि मकवानपुरमा आक्रोश, मुख्यमन्त्री पौडेलमाथि नै प्रश्न ?
२०७४, १५ चैत्र बिहीबार १२:०७
मकवानपुर, १५ चैत । प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानी हेटौँडाबाट काभ्रेमा सार्नुपर्छ भन्दै सांसद चन्द्रबहादुर लामाले हिजो प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडामा लिखित प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मकवानपुरे जनताहरुले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् । कतिपय संचारकर्मीहरुले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पदसँग राजधानी सारेको भन्ने हल्लाको वास्तविकताबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
सांसद लामाले गरेको प्रस्तावमा बसुन्धरा हुमागाईँ, रत्नप्रसाद ढकाल र लक्ष्मण लम्सालले समर्थन गरेका थिए । विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै हिँडेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापित चुपचाप बसिरहेकै अवस्थामा काभ्रेमा राजधानी सार्नुपर्ने भन्दै ३ सांसदहरुले लिखित प्रस्ताव पेश गरेपछि खैलाबैला मच्चिएको हो ।
काभ्रेको आइटी पार्कमा राजधानीको संरचना निर्माण गर्न सकिने उनीहरुले दाबी समेत गरेका छन् । सांसद लामाले नेपालको संविधान २८८ को धारा २ मा आधारित रहेर प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
केही समयअघिसम्म सेलाएको भान भएता पनि मकवानपुरे जनताहरु एक्कासी सामाजिक सञ्जालमा खनिएका छन् । फेसबुकमा खनिदै मकवानपुरका संचारकर्मी गणेश दर्पण अधिकारीले राजधानी कसले ल्याएको, कसले अन्त लान षड्यन्त्र गर्दै छ र कसले हेटौँडामा नै राख्न खोज्दैछ भन्ने कुरा बुझ्ने दिन आएको बताएका छन् । ‘ उनको प्रस्तावमा एमाले र माओवादी (बाम गठबन्धन) का ३ सांसदले समर्थन गरेका छन् । एकताका मुख्यमन्त्री पदसँग राजधानी सारेको हल्ला पनि व्यापक आएको थियो ।’ उनले लेखेका छन् ।
अधिकारीले पदसँग राजधानी सारेको हल्ला केबल हल्ला हो वा यथार्थ भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलको नियतप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनको अभिव्यक्तिको समर्थन र विरोधमा अन्य धेरैले समेत कमेन्टमा जवाफ दिएका छन् ।
त्यस्तै अर्का पत्रकार केशव समर्पणले संघीयताले विकेन्द्रिकृतको अवधारणालाई स्वीकारेको भन्दै प्रदेशको राजधानी पायक पार्ने भनेर फिता लगाएर नाप्दै हिड्ने हो ? भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको असली चरित्र अब केही दिनमा देखिने भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई तोक्दै उनले लेखेका छन् ‘उनले चाहे राजधानी सार्ने प्रस्ताव रोकिन्छ हैन भने राजधानीसँग मुख्यमन्त्री साटेको हल्ला साँचो सावित हुनेछ ।’
पत्रकार राजन दाहाल खुशराजले समेत विद्यार्थीहरुले हेटौँडामा राजधानी कायम गराउन गरेको प्रदर्शनको समर्थन गर्दै विभिन्न संघसंस्था प्रति पनि प्रश्न तेस्याएका छन् । ‘उद्योग वाणिज्य संघ खै ? प्रदेश राजधानी सार्ने तयारी हुँदै गर्दा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने पक्ष किन मौन ? हेटौंडा ठप्प पारेर प्रदेश मात्र होइन देशकै केन्द्र हेटौँडा हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ । विद्यार्थी बाट सुरु भएको अभियानमा सबैको साथ आवश्यक छ ।’ उनले लेखेका छन् ।
राजधानीकै विषयमा लेख्दै मकवानपुरका चर्चित विद्यार्थी नेता अमृत बर्तौलाले हचुवाको राजनीति बन्द हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश राजधानी हेटौँडा हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘हचुवा राजनीति बन्द होस,जसले सक्यो जसले जान्यो त्यसको हुनुपर्ने कारण के होला ? अब जे सुकै होस एकै स्वरमा भनौं ३ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी कायम गरियोस ।’ उनले लेखेका छन् ।
त्यस्तै एमाले नेतृ विष्णु ओझाले मकवानपुरमा नै स्थायी राजधानी हुनुपर्ने भन्दै जनतालाई भोट माग्दा दिएका आश्वासनहरु पुरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेश सभाको राजधानी मकवानपुर हो, अब स्थायी बनाउने सवाल हो, सवै संरचनाहरूको व्यवस्थापन भै सक्यो, राज्यकोषको ठुलो धन पनि खर्च भै सक्यो, अब जनतालाई के के गर्छु भनेर भोट माग्नुभएको थियो अब ती प्रतिवद्धता पूरा गर्न लाग्नु होस, प्रदेशको राजधानीको मुद्धा उठाएर समय वर्वाद नगर्नुहोस्, बरू प्रदेशको नाम राख्नुहोस् ।’ उनले लेखेकी छिन् ।